Taariikhda astaanta Chanel | Hal-abuurka khadka tooska ah
Taariikhda astaanta Chanel
Qoraalkan, waxaan ku ogaan doonaa Chanel taariikhda logo, waxaan falanqeyn doonaa taariikhda ka dambeysa astaanta.
Haddii aan ka hadalno noocyada raaxada iyo quruxda, Chanel isla markiiba maskaxda ku hay. Qarnigii XNUMX-aad, kororka Coco Chanel ee adduunka moodada ayaa ahaa mid aan caadi ahayn. Horyaalka moodada caadiga ah, iyo ka tagista isbeddellada ay noocyo badan oo kale ay raacaan ururintooda.
Mid ka mid ah calaamadaha ugu habboon adduunka maanta, xitaa isagoo ka weyn 100 sano. Sawirka leh laba C's oo isku xiran, ayaa weli ah qeexida raaxada ugu wanaagsan adeegsadayaasheeda.
1 Taariikhda astaanta Chanel
2 calaamad chanel
3 Chanel Typography
4 Midabka Chanel palette
5 Waa maxay sababta calaamadda Chanel ay si fiican u shaqeyso?
Guriga ugu caansan ee moodooyinka adduunka, wuxuu ku dhashay 1910-kii caasimadda Faransiiska, Paris, by Gabrielle Chanel caanka ah ama sida loo yaqaan, Coco Chanel. Waxay furtay dukaan koofiyadaha lagu iibiyo oo lagu magacaabo Chanel Modes, halkaasoo atariishooyinka Faransiiska ugu caansan ay iibsadeen koofiyadaha, taasina waxay keentay in la aqoonsado oo sumcad ku yeelato.
Chanel muddo dheer, waxa uu ku guulaystay in uu horumariyo oo aanu ku sii socon dunidii dunidu dunidu lahayd, laakiin waxaan ka heli karnaa qurxinta, ciyaaraha isboortiga, qalabka tignoolajiyada, qaybaha kale, marka lagu daro cadarkeeda caanka ah, oo caan ka ah adduunka oo dhan.
Calaamadda Chanel waxay leedahay sheeko ku hareeraysan, Waa mid ka mid ah sumadaha sida joogtada ah u ilaashaday muuqaalkeeda waqti ka dib. Si ka duwan noocyada kale, ma jiraan dhowr calaamadood, laakiin mid ka mid ah oo leh kala duwanaansho, had iyo jeer la qabsado isbeddelka waqtiyada.
Sannadkii 1915kii, markii la furay Maison De Couture Chanel ee ugu horreeyay, waxaan arki karnaa inay horay u adeegsan jirtay astaanta Chanel ee aan maanta naqaanno.
Marka la eego sawirka shirkadda ee Chanel, waxaan dhihi doonaa waa a isku darka sawirka iyo qoraalka, halkaas oo labaduba si gaar ah u shaqeyn karaan. Mararka qaarkood waxaan aragnaa sawirka dhinaca, sida ay noqon karto dharkooda iyo qoraalka dhinaca kale, tusaale ahaan boorsooyinkooda.
Astaanta calaamadda waxaa la abuuray bilawga guriga moodada, waxay u muuqataa mid fudud, waxay ku saabsan yihiin laba C oo isku xidhan oo matalaya magaca iyo magaca nashqadeeyaha Coco Chanel. Curiyayaasha isku dheeli tiran waxay horseedaan inay abuuraan dareen wada noolaansho iyo kaamil ah.
ka muuqda sanadka 1925, dhalooyinka cadarka ee ugu horreeya oo ka mid ah astaanta oo mar dambe bilaaba inay ka soo muuqato dhammaan qodobbada guriga; bacaha, dahabka, agabka, iwm.
Naqshadaynta calaamadda gadaasheeda waxaa jira qarsoodi, maadaama ay jiraan dad badan oo xirfadlayaal ah oo sheegaya in aqoonsiga uu ka weyn yahay inta la aaminsan yahay. Waxaa sidoo kale jira aragtiyo kala duwan oo ku saabsan macnaha calaamadeeda, mid ka mid ah fikradahaas ayaa ah in ay la xiriirto Boqorada Maska, laakiin taasi qofna ma xaqiijin.
Calaamadda Chanel, sida aynu sheegnay, waxaa lagu heli karaa siyaabo kala duwan, calaamad iyo qoraal wadajir ah, kaliya calaamad ama kaliya qoraalka.
Su'aasha soo noqnoqota marka la baranayo astaantan waa, waa maxay font waa calaamad Chanel ah. Hagaag halkan waxaan ku siinaynaa jawaabta. Kani waa nooc u gaar ah nooca, kaas oo markii dambe noqday nooc gaar ah oo loo yaqaan "Chanel" oo lagu ilaaliyo xuquuqda daabacaada.
Naqshadeeyayaal badan ayaa isbarbar dhigaya qoraalka shirkadda iyo xarfaha bilaashka ah sida ITC Blair's Pro Bold font, oo aad ugu eg astaanta astaanta.
Midabka Chanel palette
Nooca moodada ayaa ahaa aad u qallafsan marka la eego isticmaalka midabada muuqaalkiisa marka lagu soo saarayo warbaahinta dhijitaalka ah, maadaama midabada inta badan la isticmaalo ay yihiin madow iyo caddaan. Inkastoo munaasabado gaar ah uu u adeegsaday midabyo kala duwan muuqaalkiisa.
Haddii aan ka hadalno midabada uu u adeegsaday qaybo ka mid ah naqshadeynta, waxaan ka arki karnaa dahab, qalin, casaan, iwm. Kala duwanaansho iyadoo loo eegayo ururinta moodada si loo abuuro saameyn.
Waa maxay sababta calaamadda Chanel ay si fiican u shaqeyso?
Sida aan horay u soo sheegnay, calaamadda calaamadda Chanel fashion isma beddelin waqti ka dib. Noocyo yar ayaa gaadhay heerkan oo aan isbeddelin muuqaalkooda, taas oo ka dhigaysa Chanel waafaqsan astaan ​​leh astaan ​​wax ku ool ah oo joogto ah muddo ka dib.
sawirka astaanta, marna kamay leexan mabaadiida ay ku dhaqanto oo ay doonayso in ay gaadhsiiso dhegaystayaasheeda, xitaa marka qaybta ugu muhiimsan ee calaamadda, sida Coco Chanel, ay baaba'do oo waxaa jira isbeddel milkiilayaasha.
Waa calaamad fudud, laba C oo is-xiran, laakiin gadaashooda waxa uu noqday mid ka mid ah calaamadaha lagu garto aduunka haute couture. Waa lama huraan in aad la kulanto astaantan oo aad isla markiiba ogaatid in ay tahay dhar ka soo baxay gurigan moodada ah, ma jiro shay ka mid ah ururintiisa oo aan lahayn calaamadda ku daabacan. Chanel ayaa ah astaanta soo saartay waalida ah in calaamadda la dul dhigo dhammaan dharkeeda taasina ay keentay waxa loo yaqaan logomania.
Waxay u muuqataa in wax kasta oo noocyada waaweyni ay sameeyaan, kiiskan Chanel, wuxuu keenaa a kacaanka aduunka moodada.
Astaanta astaanta ayaa aad uga badan naqshadeynta, Waa saxeexa calaamadda isku dhafan taariikhda, qiyamka iyo nuxurka., Taasi waa sababta Chanel ay sii wado inay sameyso go'aanka caqliga leh si ay u bedesho wax yar oo suurtogal ah. In kasta oo qaybokeedu ay muddo ka dib soo koraan, calaamadeeda naqshadda caadiga ah waa mid ka mid ah kuwa ugu caansan.
Noocyo badan oo raaxada ah sida Chanel iyo Gucci waxay doortaan inay isticmaalaan xarfaha hore ee calaamaddooda, marka la barbardhigo kuwa kale sida Hermes ama Armani, kuwaas oo isticmaala xayawaanka si ay u muujiyaan qiyamkooda.
Laakiin shaki la'aan, doorashada Chanel ee naqshadeynta logo kaas oo ay ku ciyaari karto calaamad iyo qoraal, iyaga oo isticmaalaya si gooni ah ama wada jir ah, oo leh bilicsan fudud, si sahlan loo aqoonsan karo loona soo saari karo, waxay ku siinaysaa natiijo ka fiican sidii aan ku soo aragnay tan. maqaal.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » dhowr » Taariikhda astaanta Chanel
Sida loogu daro burushka Photoshop
Farta ugu yar ee ugu yar